Chipiri, April 20, 2021
musha nyika dzakabatana Politicians Bharaki Obama Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts
Yedu Barack Obama Biography inokuudza Chokwadi pamusoro penyaya yake yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mukadzi, Vana, Mararamiro, Net kukosha uye Hupenyu hwega.
Muchidimbu, iyi inyaya yerwendo rwehupenyu, kubva pamazuva ake ehudiki, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira. Hongu, vakawanda vakabvunza… Chii chiri kuitwa naBarack Obama izvozvi? Kwatiri, isu tinofunga zvakakosha kuverenga yake Hupenyu nyaya, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Barack Obama Childhood Nyaya:
Kune ekutanga Biography, ane zita rekuti "Barry" Barack Hussein Obama II akazvarwa pazuva re4th yaNyamavhuvhu 1961 (ane makore makumi mashanu nemashanu) kuna amai vachena Ann Dunham, uye baba, Barack Obama Sr, muKapiolani Medical Center Honolulu, Hawaii, United States. Inoratidzwa pazasi, amai vaObama muAmerican chena, wedzinza reChirungu baba vake vari vatema veKenya.
Paakaberekwa, baba vake vakasarudza zita rekuti "Barack" zvinoreva kuti "uyo anokomborerwa" muchiSwahili.
Amai vake vaive vachiri mudzidzi paakazvara Barack Obama uye Obama aigara naambuya nasekuru vake amai vake kwemakore mashoma apo amai vake vakapedza zvidzidzo zvake. Obama aingova mukomana mudiki apo amai vake pavakaziva kugona kwake uye vakaudza shamwari kuti iye anotenda kuti mwanakomana wavo anogona kuva mutungamiriri weUnited States kana akura. Semwana asina hanya, akazvitenda.
Nehurombo, vese vabereki vakarambana uye vakatadza kugara pamwe chete uye kuona mwanakomana wavo achikura. Vabereki vake vakaparadzaniswa apo Barack aingova mucheche. Sezvo mukomana mudiki achikura, Obama anobvuma kuti aive nematambudziko anosanganisira mbanje uye cocaine achiri mudiki.
VERENGA Muhammadu Buhari Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Zvisinei, Barack Obama akapedza chikoro chesekondari mu1979 ndokuenda kuLos Angeles kuenda kuOpidental College. Muna 1981, akatamira kuColumbia College, Columbia University muNew York City, kwaakakunda mune zvematongerwo enyika nesayenzi muhukama hwepasi pose. Obama aine Bachelor yake yeBhizimisi mugore re1983.
Akapinda muHarvard Law School mukuwa kwe1988 kwaakashanda semutungamiri weHarvard Law Review. Kusarudzwa kwake semutungamiri wekutanga wevatema weHarvard Law Review vakawana ruzivo rwehurumende uye naizvozvo vakapisa basa rose rezvematongerwo enyika. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Barack Obama Hupenyu Hwemhuri:
Mugwagwa waimbove mutungamiriri wenyika yeUS kune stardom ingadai isina kunakidza sezvayakazova pasina rubatsiro rwemitezo yemhuri. Muchikamu chino, isu tichapa zvimwe chokwadi nezve vabereki vaBarack Obama.
About Barack Obama Baba:
Baba vake, Barack Obama Sr.ari weKenya Economics uyo akazvarwa pazuva re18th raJune 1936 muRachuonyo District, Kenya. Akakurira mumusha weNyang'oma Kogelo muSiaya County, Kenya. Anofara Barack Obama Snr akapihwa mukana wekuenda kuUS kuburikidza nedzidzo.
Obama Snr akasangana nemukadzi wake Ann Dunham muna 1960 mukirasi yemutauro weRussia paYunivhesiti yeHawaii kuManoa, kwaakange ari mudzidzi wekune dzimwe nyika pakudzidza. Vaviri vakaroora muWailuku, Hawaii muna Kukadzi 2, 1961, mwedzi mitanhatu Obama asati azvarwa. Elder Obama vakapedza degree ravo rekupedza degree mu economics muHawaii, vakapedza kudzidza muna Chikumi 1962. Akave akazara fledge economics iyo mwanakomana wavo akazendama nayo kuti anzwisise rwendo rwake rwematongerwo enyika.
VERENGA Joe Biden Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Vabereki vaObama vakarambana munaKurume 1964 mushure maizvozvo akadzokera kuKenya gore rimwe chetero kuzoroorazve kechitatu. Akashanyira mwanakomana wake kuHawaii kamwe chete, panguva yeKisimusi muna 1971, asati aurayiwa mutsaona yemotokari musi wa24 Mbudzi 1982. Barack Obama aive nemakore makumi maviri nerimwe pakafa baba vake.
About Barack Obama Amai:
Amai vaBarrack Obama, Ann Dunham vakazvarwa musi we29th waNovember 1942, Wichita, Kansas. Akafa musi wechinomwe waNovember 7, muHonolulu, Hawaii. Iye wedzinza reChirungu, aine mamwe maGerman, maIrish, maScotland, maSwiss, nemaWales.
Mukadzi waBarack Obama:
Michelle akasangana naBarack Obama pavaive pakati pevashoma vemuAmerican America kufemu yavo yemagweta. Kusangana kwavo kwakamutsa hukama hwakatanga nebhizinesi rekudya kwemasikati. Vakaroora pazuva re3rd raGumiguru 1992.
Sezvo panguva yekunyora, vese vari vaviri vabereki vanoda kuvanasikana vavo Malia Ann (akazvarwa 1998) naNatasha (anozivikanwa saSasha, akazvarwa 2001).
Kutarisana nerusarura Munguva Yehudiki:
Achifunga nezvehudiki hwake, Obama akati, "Kuti baba vangu vaisaratidzika sevanhu vakaita sevakandikomberedza - kuti vaive vatema semamo, mai vangu vachena semukaka - vasina kunyorwa mupfungwa dzangu." Akatsanangura kurwira kwake semunhu mukuru wechidiki kuyananisa mafungiro enharaunda enhaka yake yemarudzi mazhinji
Barack Obama Hupenyu Hwako:
Barack Obama ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Strengths: Unogadzira, unofarira, une rupo, moyo unodziya, unofara, unoseka.
Zvakaitwa naBarack Obama: Dhiyabhorosi, mabhidhiyo, kutora mazororo, kuverenga imwe neimwe Harry Potter bhuku, rewatching Spider-Man naConan varairi vemafirimu, mavara akajeka uye kufara neshamwari
Mukupfupisa, Barack Obama mutungamiriri-akazvarwa. Iye anoshamisa, anogadzira, anozvivimba, ane simba uye akaomesesa zvakanyanya kuramba uye anokwanisa kuzadzisa chero chinhu chaanoda mune chero chikamu chehupenyu chaanozvipira. Pane simba chairo kwaari uye ne "mambo wesango" chinzvimbo. Ane shamwari dzakawanda dzinopa uye dzakavimbika.
Nezve Barack Obama Nickname:
Hunyanzvi hwake hwekutamba basketball hwamuwanisa zita remadunhurirwa rekuti "O'Bomber" kuchikoro chesekondari. Izvi zvisati zvaitika, zita rake remadunhurirwa rehudiki raive "Barry" uye paingova panguva yemakore ake ekuyunivhesiti ndipo paakasvika kuzoshevedzwa nezita rake rizere 'Barack Obama'.
Tinotenda nekuverenga kwedu Biography ye Barack Obama - murume uyo asati agadzirira kusiya mukana weAmerica. Vapepeti vedu paChidikiBiography vakatarisa kururamisa uye kurongeka pavanenge vachisimudza Ex-US Mutungamiri's Biography uye Yehucheche Nyaya.
Ndokumbira kuti uise zvaunotaura kana kutibata nesu kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka pachinyorwa chino nezve Barack.